NichePhone-S telefoon Android ah oo kaar le'eg | War gadget
Waqtiyadan, waxaan weydiisaneynaa wax intaa kayarTusaale waa taleefan gacmeed, waxaan rabnaa inaan ku cunno waxyaabo badan oo ku jira taleefannada yar yar, sidaa darteed, tusaale ahaan, telefoonnada caanka ah ee leh shaashad aan dhammaad lahayn ayaa la sameeyay, taasoo u yareyneysa looxyada inay daasho. Si kastaba ha noqotee, kuwa kaliya ee doonaya taleefan iyo ku habboonaanta cabbirka wax walba oo kale wali waxaa jira bedel.
Taleefankan yar ayaa si xamaasad leh loogu dhawaaqay xaqiiqaduna waxay tahay inay soo jiidatay dareenkeena, hubaal waxaa jira tiro badan oo adeegsadayaal ah oo ku farxi lahaa inay helaan adeegyada ku habboon ee NichePhone-S, taleefan Android ah oo layaab ku leh cabirkiisa yar, aan ku baranno xoogaa si dhow.
Marka ugu horeysa, culeyskiisa ayaa ka sarreeya wax walba, kaliya 39 garaam oo taleefan ah oo qaadaya booska kaarka deynta, laga yaabee inuu yahay badbaadiye nololeed ama beddelka gaariga ama boorsada ay noqon karto fikrad weyn. Sidee ayey noqon kartaa si kale, waxaa ku jira taxane astaamo yar yar oo ka dhigaya taleefan casri ah, tan hore ayaa ah inay ku jirto Android, tan labaadna waxay leedahay, tusaale ahaan, Bluetooth si aan ugula jaanqaadno wax kastoo sameecadaha dhagaha ah ee aan u aragno inay ku habboon yihiin. Nasiib darrose maahan shaashadda oo dhan, waxay leedahay badhanno taxane ah oo ficil ahaan ku shaqeeya taleefanka oo dhan, shaashadda ayaa kaliya na siin doonta macluumaad muhiim ah.
Telefoonkani wuxuu leeyahay dhumuc dhan lix milimitir wuxuuna taageeraa isku xirnaanta xogta 3G, ma xuma wax walboo aan xumaaneyno hadii aan tixgalino inay ku fikirayaan inay ku soo bandhigaan suuqa qiyaastii 88 Yuuro, taas oo aan yareyn marka loo fiiriyo shaqadeeda, laakiin qaali midkood. Haa runtii, Ha iloobin ku rakibida barnaamijyada ku saabsan Android-kaaga kaliya 550 Mah oo batari ah, ma awoodi doontid inaad sameyso. Waxaad ku qaban kartaa laga bilaabo Nofeembar 10 ee soo socota bogga internetka ee Mustaqbalka.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » NichePhone-S taleefanka gacanta ee loo yaqaan 'Android size card'
Amazon Fire TV Stick waxay ku timid Spain qiimo aad u xiiso badan